Ukubukezwa Kwemvelo: Ithuluzi Elinamandla Lokususa Idatha leWebhu
I-Connotate iyisofthiwe yokudonsa emangalisayo eyenza abasebenzisi bayo bakhiphe inani lemininingwane emakhasini ewebhu. Ibahlinzekela nge-automated ye-web scraping yesikhulumi esingasiza ekutholeni yonke idatha abayidingayo ngaso leso sikhathi. Ihlanganisa ngesivinini esiyingqayizivele ngendlela ephezulu futhi efanelekayo okuqukethwe. Abaphathi kanye nabaseshi bewebhu abasebenzisa lolu hlelo lokuxazulula isixazululo bangaba nezinzuzo ezilandelayo.
Ithuluzi Lokusebenzisa I-Web Data Extraction Tool
I-Connotate inikeza isikhombimsebenzisi esibonakalayo esilula, lapho abasebenzisi bangakwazi ukukhipha yonke idatha abayidinga ngaphandle kokuchitha amahora amaningi - install cloud linux on centos linux. Eqinisweni, ochwepheshe bale platform bayanakekela konke, ngakho-ke abashayi bewebhu akudingeki bachithe isikhathi esiningi baqoqa yonke imininingwane abayifunayo, futhi akudingeki bachithe imali eningi kubahleli abazokwenza umsebenzi kubo. Ngaphandle kokusebenzisa le platform, abasebenzisi kuzodingeka benze wonke umsebenzi ngesandla. Ukukhipha okuqukethwe kungaba ngumsebenzi onzima ezindleleni zendabuko. I-Connotate isebenzisa uhlelo oluphambili nolwazi oluzenzakalelayo lwewebhu, ukuze unike abasebenzisi bayo izixazululo ezinhle kakhulu ze-web scrap.
Ukuqoqa idatha kusuka kumawebhusayithi ahlukahlukene akuyona umsebenzi olula. I-Connotate isebenzisa ubuchwepheshe obuqinile futhi iyazi kahle indlela yokuvula ikhono langempela lokuqukethwe kwewebhu. Umgomo wayo ukunika amandla abasebenzisi bayo ukuhlangabezana nezidingo zabo zolwazi. Ngesikhathi esifanayo, lengeza inani lokuqukethwe inkampani enikezela kubasebenzisi bayo. Isibonelo, sinikeza ama-analytics amakhulu, ukubukeka, ama-dashboards alula nokuningi. Abasebenzisi kudingeka bacele ukubonisana ngokunikeza izibonelo ezithile zohlobo lwelwazi lewebhu abafisa ukuluqeda.
unikeza ama-Agent abanolwazi
Abasebenzisi kudingeka badale i-agent ye-Connotate ngokuchofoza okukodwa. Ngaphezu kwalokho, isofthiwe yesitoreji sedatha ingaxhumanisa okuqukethwe nedatha ngokuzenzekelayo. Lokhu kwenza wonke umsebenzi ube lula, njengoba uxazulula izinkampani eziningana, lawula amalungelo okuqukethwe futhi ujoyine idatha emithonjeni eminingi. Amanxusa ochwepheshe kuConotate aqonda izinselele. Sebenze nabathuthukisi bezinhlelo zokusebenza, ukuqala-ups, nabanye abahlinzeki bebhizinisi ukuzinqoba.
Iqoqa amakhulu e-Web Data
I-Connotate's software scraping software yenza uhlelo lwakho lokunikezela kwedatha lonke, kufaka phakathi ukukhipha, ukuguqulwa, ukujwayelekile kanye nokuqukethwe kokuqukethwe. Amandla ethu wokuhlela amandla akuvumela ukuba uhlele ama-agent namanye amaqembu afana nawo, ekunika ukulawulwa kahle okuhle ngaphezu kwesitoreji sedatha yewebhu. Amathuluzi wethu wokudonsa idatha akuvumela ukuthi ukhiphe ngokususelwa ekutheni isayithi libuyekezwa kaningi kangakanani nokuthi idatha ebucayi kangakanani ngenkathi igcina ukugeleza okulinganiselayo kokuqukethwe zibe ngaphansi kwezinhlelo zakho ezansi.
Ubuchwepheshe obuphambili obusetshenziswa yiConotate kusiza bobabili abaphathi kanye nabasesho bewebhu ukudala isethi yedatha nemikhiqizo yokuqukethwe ngendlela esheshayo nephumelelayo. Ngalesi sigaba, amakhasimende abhekana nezinzuzo zamasu, idatha enhle kanye nezindleko ezinciphile.